IiPhilippines Zidlakazwe YiNkanyamba UBopha
FUNDA NGOLUNYE ULWIMI ISepedi ISpanish Isi-Indonesia Isi-Isoko Isi-Itali IsiAlbania IsiArmenia IsiAzerbaijani IsiAzerbaijani (sesiCyrillic) IsiBhulu IsiCroatia IsiCzech IsiDanish IsiDatshi IsiEstonia IsiFinnish IsiFrentshi IsiGrike IsiHungary IsiJamani IsiJapan IsiKinyarwanda IsiKorea IsiLithuania IsiMalagasy IsiNgesi IsiNorway IsiPhuthukezi IsiPolish IsiRashiya IsiRomania IsiSerbia IsiSerbian (saseRoman) IsiSlovak IsiSlovenia IsiSuthu (Lesotho) IsiSwahili IsiSwedish IsiTagalog IsiTshayina SaseMandarin (Esenziwe Lula) IsiTshayina SaseMandarin (Esiqhelekileyo) IsiTsonga IsiTswana IsiUkrainian IsiXhosa IsiZulu
JANUWARI 14, 2013
EMANILA, kwiiPhilippines—Kwafa abantu abangaphezu kwe-1 000 kwaza kwafuduswa abayi-970 0002 emva kwenkanyamba enamandla eyatshabalalisa iiPhilippines ngoLwesibini, Disemba 4, 20123. Nasemva kwethuba elingangenyanga, amaNgqina kaYehova asaqhubeka esizisa izinto eziluncedo kumaxhoba eNkanyamba uBopha (abantu balapha bathi nguPablo)4.
Ukususela ngoJanuwari 7, iofisi yesebe yamaNgqina kaYehova eseManila yaqinisekisa ngeendaba ezibuhlungu zokuba mahlanu amaNgqina abulawe seso saqhwithi. Amanye onzakala kakhulu emqolo aza alaliswa esibhedlele6. Ukongezelela, iintsapho zamaNgqina ezimalunga ne-520 zafuduswa kuba imizi eyi-140 yayidilikile yaye eminye eyi-400 yonakele8.
Abazalwana abasuka kwiofisi yesebe batyelela imimandla efunyenwe sesi saqhwithi ukuze babone ukuba zonakele kangakanani, balungiselela iindlela zokunikel’ uncedo, bathuthuzela baza banikel’ uncedo lokomoya kwabo. AmaNgqina aseka ikomiti yokunceda ngexesha lentlekele eza kumisela iindawo ezisixhenxe ezinezinto zokunceda ize incedise amatsha-ntliziyo anika abantu ezo zinto.
Kwezinye iindawo zeli lizwe, isaqhwithi semka nokona kutya kuthandwayo, kunye namasimi erayisi, aweebhanana, nemithi yekhokhonathi. Ngenxa yoko, ikomiti yokunceda ngexesha lentlekele yamaNgqina yathumela iilori ezinokutya okungaphezu kweephawundi eziyi-28 600. Sekunjalo, kwenye indawo eyayintlithwe sisaqhwithi kwakunzima ukusa uncedo kibhulorho yayidilikile.
Inkanyamba uBopha yonakalisa nezindlu eziyi-15 ekunqulelwa kuzo, ezibizwa ngokuba ziiHolo zoBukumkani, yaza yabhodloza ezi-2. Noko ke, abanye abantu abafudukayo ngenxa yesaqhwithi bahlaliswa okwethutyana kwiiHolo zoBukumkani ezazingonakalanga. Ikomiti yokunceda isebenzela ukuba ifake la maxhoba kumakhaya afanelekileyo.
Zonke izinto zokunceda zibhatalwa ngeminikelo yamaNgqina kaYehova asekuhlaleni namanye akumazwe ngamazwe. IQumrhu Elilawulayo lamaNgqina kaYehova linceda ekunyamekeleni ezo ndleko ngokusebenzisa imali enikelwa kumsebenzi wamaNgqina owenziwa ehlabathini lonke.
UDean Jacek, isithethi samaNgqina kaYehova kwiiPhilippines, sithi: “Sonke sizilele ukufelwa ngabahlobo nabantu esinqula nabo yaye sibuhlungu ngomonakalo obangelwe sesi saqhwithi. Kodwa siza kuqhubeka sisenza konke esinako ukuze sifak’ isandla kwiindlela zokunikel’ uncedo, kuquka nokunceda kwizinto zobuthixo nokuthuthuzela abamelwane bethu.”17
Okwenzeka ePhilippines: UDean Jacek kule nombolo, +63 2 411 6090